Gutenberg University of Mainz - Study eJalimane
Gutenberg University of Mainz Yokuxhumana
isifinyezo : JGU
abafundi (ngu.) : 33000
Ungakhohlwa xoxa Gutenberg University of Mainz
Bhalisa at Gutenberg University of Mainz
With mayelana 33,000 abafundi abavela mayelana 130 izizwe, Gutenberg University Mainz (JGU) ingenye emanyuvesi ngobukhulu eJalimane. Njengoba nje inyuvesi olunzulu Rhineland-Palatinate, JGU ihlanganisa cishe zonke eyala academic ngaphansi kophahla olulodwa, kuhlanganise Mainz University Medical Center, the School of Music, futhi Mainz Academy of Arts. Lesi isici esiyingqayizivele landscape German zezemfundo. With 75 mikhakha kanti ingqikithi 242 tasenyuvesi, kufaka 106 Bachelor kanye 116 izinhlelo ze-master, JGU unikeza neluhla lolubanti ngokungavamile izifundo. Abanye 4,360 izifundiswa, kufaka 548 osolwazi, ukufundisa kanye nocwaningo JGU kunokuqala 150 departments, nezikhungo, kanye nemitholampilo (kuhlanganise Mainz University Medical Center; ngo-December 1, 2014; usekelwa federal third-party ngezimali).
JGU kuyinto odumile jikelele iriseshi yaseyunivesithi kokubonwa ezweni noma emhlabeni jikelele. Lokhu idumela iza sibonga abacwaningi yayo evelele ngabanye kanye impumelelo ucwaningo okungavamile emkhakheni kuyizinhlayiyana futhi hadron physics, izinto wesayensi, imithi Translational, sciences zokuphila, eyala abezindaba, futhi izifundo zamasiko zomlando.
nobuhlakani JGU kwezesayensi iye kufakazelwa impumelelo yayo kule Excellence Initiative by the German ohulumeni federal kanye nesimo ukukhuthaza ucwaningo top-level emanyuvesi German: Mainz University ingenye 23 amanyuvesi eJalimane eziye wathola ukwamukelwa Cluster okuthiwa of Excellence kanye nokwamukelwa for Graduate School of Excellence. I-Cluster of Excellence on “Precision Physics, Ukusebenzisana naletinye Ukuhleleka kwe Matter” (PRISMA), okuyinto ngokuyinhloko ukubambisana phakathi kuyizinhlayiyana futhi hadron zesayensi, futhi Graduate School of Excellence “Materials science ku Mainz” (Mainz) abhekwa njengamagama phakathi namaqembu ocwaningo elite emhlabeni wonke. Lezi zinhlelo ezimbili uzothola ngezimali ukuze Kumholi wokuhlabelela EUR 50 million 2017.
tikhundla wale nyuvesi ezinhle amazinga kazwelonke international futhi umklomelo we eziningi imiklomelo ocwaningo ukuqinisekisa ngokwengeziwe ukubaluleka nempumelelo ucwaningo lwenziwa ngu izifundiswa JGU ezisekelwe. Le mpumelelo okuye kwafezwa engxenye ngenxa esiyingqayizivele emikhulu imishini okucwaninga e-Mainz University, ezifana TRIGA amanzi ukukhanya ucwaningo ophendulayo kanye Mami electron namafutha, bobabili ukuheha abacwaningi ezivela emhlabeni wonke. Imfundiso ucwaningo okugxile - nokuhlanganisa ezihlosiwe kanye zakuqala okuqukethwe ucwaningo zingene lwezifundo - kungenye isici esibalulekile ifilosofi JGU.
JGU yiyona university sole German yale size ukuhlanganisa cishe zonke izikhungo on one campus, kuyilapho Housing izikhungo zocwaningo ezine umlingani ukuthi ucwaningo cutting edge ngaphandle isakhiwo senhlangano ye enyuvesi ngokwayo. Kukhona futhi on-campus umfundi zokulala kanye ukunakekela izingane izikhungo. I umisa emitholampilo futhi emtholampilo / mbono Mainz University Medical Center zitholakala ngaphakathi cishe ingxenye eyodwa ikhilomitha campus.
JGU uhlala umqondo enyuvesi zomphakathi yingxenye ebalulekile yomphakathi kanye ne nomphakathi kuba ingxenye. Lokhu kusho ukuthi siphinde sihlinzekele nezinhlelo ezihlanganisa nezinhlelo imfundo yempilo yabo yonke futhi ikhuthaza okufika ngesikhathi futhi olunzulu ulwazi kanye nobuchwepheshe yokudlulisa.
Yaqalwa ngo 1477 ngenkathi Gutenberg futhi yavula kabusha ngemva kwekhefu engu-150 in 1946 ngamabutho French ke ezinze Germany, Gutenberg University Mainz ukweleta lukhulu indoda egama layo ithela namandla akhe. With impumelelo yakhe, Inyuvesi izama ukukhuthaza kanye nokuqalisa imibono, ukusiza ukuthuthukisa izimo zabantu eliphilayo ulwazi, ukwenza lula ukufinyelela lazo lemfundo kanye nesayensi, nokukhuthaza abantu ezedlula Imingcele eziningi ukuthi ubhekana nsukuzonke.
Lona mission Gutenberg University Mainz uzibekele.
Njengoba isikhungo international for ucwaningo, okufundisa, nokufunda, Gutenberg University Mainz has a ukuzibophezela ekhethekile ukweqa imingcele phakathi kwezizwe kanye namasiko. Lokhu kuzinikela Kumiswa yayo esitatimendeni mission kanye nomqondo amasu, futhi kuyabonakala ubudlelwano yayo eqinile ngamazwe. WaseMainz University kuyinto umdlali asebenzayo in the Inethiwekhi yomhlabajikelele yama-isayensi nocwaningo kanye yokufundisa nokufunda.
Umsebenzi international lososayensi JGU kusekelwa inethiwekhi 145 kanye nekusebentisana amanyuvesi umlingani on wonke amazwekazi. Siphinde sibe 700 Izivumelwano ngokubambisana neNhlangano European umlingani emayunivesithi hlelo Erasmus.
mayelana 4,000 JGU Students abeza bevela kwamanye amazwe. Lokhu kulingana amaphesenti angu nanye jikelele umzimba umfundi.
Kwaphela iminyaka, JGU bekugcwele emanyuvesi okuholela umfundi European nonguthisha izinhlelo exchange. Inyuvesi iye yaklonyeliswa DAAD Erasmus Quality Ilebula E-Quality 2013 ngokokuqala wesine kakade - emva 2004, 2007, futhi 2011 - ukuqaliswa yayo evelele zohlelo ukuhamba Erasmus umfundi.
izifunda Yethu core exchange zesayensi kanye umfundi zihlanganisa amazwe aseYurophu France nePoland kanye United States of America, INingizimu Korea, futhi China ngaphandle kwe-Europe.
Mainz University siqeqesha abafundi bayo ukuba izakhamuzi global: abafundi kuzo zonke izifundo zokutadisha angase atadishe phesheya ngenxa yesizathu esisodwa noma ezimbili izinyanga. Ngaphezu kwalokho, JGU futhi inikeza izifundo yokufunda ngokuhlanganyela amayunivesithi angaphandle. With ezingaphezu kuka 650 izifundo olwenziwa ngezinye izilimi ngaphandle German kanye eziningi olunye ulimi izifundo, JGU inikeza abacwaningi abasha enhle kakhulu yokulungisa wezomsebenzi international.
imfundiso yenkolo yamaKatolika kanye nemfundiso yenkolo yamaProthestani
Social Sciences, Imidiya bese Ezemidlalo Isayensi
Ulimi and Cultural Studies
Zomlando kanye Cultural Studies
physics, mathematics kanye computer science
Chemistry, Pharmacy Earth Sciences
Nakuvulwa University of Mainz e 1477, uMbhishobhi Omkhulu Mainz, Elector futhi Shansela Kwesizwe-German, Diether von Isenburg, waqaphela iphupho eyandulela wakhe. Izenzo zakhe babe ngokuphelele ngokuvumelana nomoya isikhathi, njengoba amanyuvesi lesifunda yayisikhokhiwe eyasungulwa yonke emikhulu uthi indawo cishe.
e Mainz, imfundiso ekhuthaza, imithi, neBandla futhi komthetho wamaRoma babefundiswa ngaphezu ubuciko eziyisikhombisa ovulekile, i.e. lolimi, mpendulo, dialectics, izibalo, geometry, astronomy, nomculo. Lokhu uhla izifundo kwakuyisici esibonakalisa ngempela eliyingqayizivele ngesikhathi, ngoba amayunivesithi amaningi European ahlinzekwa eyodwa noma ezimbili zalezi kuphela “amandla aphezulu.”
Kakhulu esidumile kakade ngonyaka 1508
I-University of Mainz yaqhakaza. Emashumini eminyaka zayo zokuqala ezimbalwa, inani labafundi rose kuya cishe 200. Futhi in 1508, WaseMainz University kwaba kakade "odumile kakhulu,"Njengoba Petrus Ravenna yabonisa. Nokho, imizamo ephindaphindiwe at kabusha - e 1523, 1535, futhi 1541 - kubonise ukuthi le nyuvesi kakade nenhlekelele yokuqala, kubangelwa ngokuyinhloko isisekelo salo singenele kwezomnotho. Ngaphezu kwalokho, iNguquko YamaProthestani waqala ukuthatha ukuma akazange behluleka ukushiya izibazi emzini Mainz.
Ngokuvula ongumJesuit ekolishi e 1561, uMbhishobhi Omkhulu Mainz waphishekela imigomo eziningana. Ngakho uhlaziyo umzamo omkhulu zemfundo ukuze basize iSonto neNkathi Yokumelana Nenguquko futhi wasiza ukuvuselela nokusimamisa nyuvesi. Waphumelela ukwenza kanjalo hhayi kuphela emkhakheni wezenkolo kodwa futhi emkhakheni wezokwelapha. Ekupheleni, kwakukhona ngisho kudingeka kwesakhiwo: the Domus Universitatis lakhiwa phakathi 1615 futhi 1618. Namuhla isakhiwo zomlando Kuqhutshwa iSikole senyuvesi of Journalism futhi Institute of Umlando wase-Europe.
e Mainz, njengakwezinye izindawo, i-Iminyaka Engamashumi Amathathu neMpi (1618-1648) kuholele yokwehla kakhulu kwamanani inani labafundi. Lapho amabutho Swedish sahlala komuzi, amalungu waseMainz University wangena "ekudingisweni" ukuze Cologne, Ngokwesibonelo, lapho baqhubeka khona imfundiso. Ngemva kwempi, University of Mainz kwakuhamba kancane kuphela ukuze siphinde sithole.
isisekelo somnotho Secure
Ukulandela nokucindezela ongumJesuit Order 1773, Mainz yayo ekolishi yahlakazeka lowo nyaka. Lokhu kudingeka enye kabusha amaphepha agunyaza inyuvesi. Ekugcineni ngo 1781, i-Mainz University Foundation Isikhwama yasungulwa ngokwakha isisekelo ephephile kwezomnotho enyuvesi. Ngaphezu kwalokho, WaseMainz University manje enwetshiwe uhla yayo izifundo futhi eyala. Faculty yalo entsha yokubambisana zomlando Izibalo sigxile ezicini ezihlukahlukene ngaphakathi emkhakheni umlando kanye nokubusa, inqubomgomo yomphakathi, nezibalo. A-Faculty of Cameralistics lamiswa, eyayihlanganisa, Ngokwesibonelo, ukufundisa izibalo, botany, kanye nokwelashwa wezilwane imfuyo. Njengasekugumbuqelweni esiqalweni, uhlelo lwezifundo kwakuhlanganisa wezenkolo imithi. Lokhu ezibanzi izifundo bakhangwa kuze kufinyelele 700 abafundi ukuza Mainz kule minyaka embalwa ezayo. Ngaleso sikhathi, WaseMainz University lithintwe kakhulu Yokukhanyiselwa kanye kwaba ekhaya cishe isazi aziwa kakhulu ase-nyuvesi ubudala: Georg Forster, ubesebenza njengodokotela ikhanda yezincwadi e-University of Mainz. I bachuma waseMainz University kusukela kulesi sikhathi ezaba isibonelo ngoba isibalo esikhulu sezithunjwa namanye amayunivesithi ezibalulekile European.
The French Revolution (1789-1799) kwesokunxele iminonjana eziningi Mainz. Nenqwaba, izwe lokuqala emhlabathini German yasungulwa ngo 1792. Ukufundisa at waseMainz University, Nokho, saphela ngenxa yezimpi nemibhikisho unomphela, ekunqotshweni futhi thola kwedolobha Mainz. I-Faculty of Medicine owabanjwa mhlaka kuze kube sekupheleni futhi ukhishwa zobudokotela salo esifanele kuze 1818, kodwa kwadingeka ukuvala eminyakeni emihlanu kamuva.
Kuphela waseMainz University Foundation Isikhwama, esikoleni sabefundisi bamaKatolika, kanye Mainz “nokubeletha,” isikole ababelethisi eyasungulwa ngo 1784, ayaqhubeka ekhona ngokuhamba kwesikhathi, olondolozela kancane yesiko senyuvesi kuze kuvulwe yayo 1946. Ngaphambi kwalolo suku, sekube nezingxoxo okuqhubekayo mayelana sebephinde wonke ukusebenza nyuvesi-level nokufundisa, kodwa wonke la amacebo kuhlulekile ngenxa yokuntuleka ngezimali.
Ngomhla ka-May 15, 1946, Gutenberg University Mainz uqalisiwe imisebenzi yayo nokufundisa ngaphansi igama layo elisha. Linani selilonkhe lebantfu labange 2,088 abafundi bangena semester ukuvulwa kanye, okokuqala emlandweni, abafundi besilisa nabesifazane zingeniswe kakhulu. Ukufundisa ezifundazweni ngesayensi yemvelo lwaluqala 1946/47 semester ebusika futhi isibalo sezikhungo abafundi ukuba 4,205.
Nge nyuvesi uwavule ngakwesokudla ngemva kweMpi Yezwe II, uhulumeni wamasosha French befuna ukuzokwenza umnikelo ukufundisa amaJalimane ngendlela "umoya omusha." entsha waseMainz University wawusegunjini wangaphambili emabhalekisini lempi, okwakukhona isisekelo sethu samanje international abafundi basezikhungweni zemfundo ephakeme. Njengoba campus JGU itholakala okude kancane kusukela Mainz city centre, eyunivesithi uye wahlela ezihlukahlukene tinhlelo tekufinyelela ebantfwini, okuye kwaphumela iphothifoliyo eziyingqayizivele nezakhiwo kuhloswe ngaso ukuqonda komphakathi isayensi njalo. Imisebenzi zihlanganisa, Ngokwesibonelo, imikhosi isayensi, abacwaningi 'nobusuku obungamashumi amane, nokucacisa, futhi izinkulumo zeningi-campus Gutenberg kanye nezikhungo yedolobha kwamasiko ezifana Mainz State Theatre noma iminyuziyamu ezihlukahlukene zaleli dolobha.
Emashumini eminyaka alandelayo, Gutenberg University Mainz sihlangabezane ukukhula okuqhubekayo e isibalo saso abafundi kanye nezinto ezihlukahlukene eyala ahlinzekwa. Ngo 2011, Ngokwesibonelo, JGU abalwa mayelana 37,000 abafundi abavela 130 izizwe wanikela 145 izihloko ezahlukene, ihlelwe 119 Bachelor kanye 96 izinhlelo ze-master. Ukuba inyuvesi oluphelele, Gutenberg University Mainz ihlanganisa cishe zonke eyala zezemfundo, ehlanganisa Mainz University Medical Center, i-Mainz School of Music, kanye Mainz Academy of Arts - uhlobo ezingavamile kodwa ezuzisayo yenhlangano ngaphakathi landscape German imfundo ephakeme.
Uhlelo JGU Jikelele Ucwaningo, International Summer Course, Faculty of Translation Studies, Linguistics, and Cultural Studies in Germersheim, kanye nokubambisana eziningi ngamazwe senyuvesi bayizibonelo ezinhle kakhulu imigomo ebekwe ukuvula eyunivesithi. Ukuba khona ikhono yamaKatolika kanye nemfundiso yenkolo yamaProthestani, kakhulu igama enyuvesi, futhi eziningi amagama emigwaqo kule nyuvesi namanje ubudlelwano phakathi "ubudala" kanye iyunivesithi "entsha". Ngakho, Gutenberg University Mainz zingathola ku eziningi ezinhle ahlonishwe amasiko kanye uyaqonda nezibopho zabo zanamuhla, ezichazwe Isitatimende JGU Mission.
Uyafuna xoxa Gutenberg University of Mainz ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Gutenberg University of Mainz kumephu
Izithombe: Gutenberg University of Mainz Facebook ezisemthethweni
Gutenberg University of Mainz Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa sikaJohannes Gutenberg University of Mainz.